Rio Ferdinand Iyo Peter Crouch Oo Saadaaliyey Natiijada Kulanka Liverpool vs Atletico Madrid Ee Caawa – Kooxdee Ayey Guul Ugu Bushaareeyeen? – Cadalol.net
Halyeygii Manchester United iyo xulka qaranka England ee Rio Ferdinand ayaa saadaaliyey natiijada kulanka Liverpool ay caawa ku martigelin doonto Ateltico Madrid ee tartanka Champions League.
Reds ayaa Anfield ku martigelin doonta Atletico oo lugtii hore ee magaalada Madrid kaga soo badisay 1-0, waxaana caawa u taalla shaqo adag oo ay tahay in Klopp uu sameeyo mucjisooyin la mid ah tii Barcelona uu ku dhigay xili-ciyaareedkii hore, taas oo semi-finalkii ay ku karbaasheen 4-0 iyadoo is-araggii hore ee Camp Nou lagu soo dhuftay 3-0.
Rio Ferdinand oo xalay ku sugnaa Istuudiyaha telefishanka BT Sports oo ay ku gorfaynayeen kulamadii Champions League, ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in Liveprool ay kasoo kaban doonto guul-darrada lugtii hore soo gaadhay ee 1-0 ah, waxaanu tilmaamay inuu aad u sugayo waqtiga ciyaartaas oo ay ku fog tahay.
Ferdinand waxa uu sheegay in ciyaartani noqon doonto mid jawigeedu wanaagsan yahay oo cid walba doonayso inay daawato waxa Anfield ka dhacaya iyadoo laga shidaal qaadanayo sidii ay Barcelona ugu garaacday xili ciyaareedkii hore, waxaanu yidhi: “Ma sugi karayo ciyaartan, waxay noqon doontaa jawi wanaagsan.”
“Khibraddii sannadkii hore (garaacistii Barcelona) iyo jawiga Anfield abuurayo, ma dhigan kartid khamaar Liverpool kasoo horjeeda, sababtoo ah waa koox taqaanna sida loo guuleysto.
“Si fool xumo ah ayay ku guuleysan karaan, dib ayay u riixi karaan, natiijadana dib ayay usoo celin karaan. Waxay leeyihiin khibraddii sannadkii hore ay kaga soo kabteen meel ay cid walba u malaynaysay inay hadheen, waxay ila tahay inay haystaan fursad weyn.”
Halyeygii hore ee Liverpool ee Peter Crouch ayaa isaguna sheegay inuu ku sharatami karayo in Liverpool guuleysan doonto, waxaanu hoosta ka xarriiqay in Atletico ay tahay koox dhib badan oo ah midda kaliya ee joojin karta Reds.
“Haddii ay cidi joojin karto Liverpool, waa Atletico laakiin kaliya waxaan ka fikirayaa Anfield, jawigu wuxuu ahaan doonaa laydh oo kale, Liverpool na way soo bixi doontaa.” Ayuu yidhi Crouch.
Si kastaba, Liverpool waxay tahay inay kasoo kabato guul-darro 1-0 ah oo lugtii hore loo xambaariyey, waxaanay u baahan tahay inay goolal dhaliso, kana fogaato in shabaqeeda lasoo taabto.